Daawo sawirada:alshabaab oo soo bandhigay hub iyo gadiid dagaal oo dowlada ay ka qabsadeen | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Daawo sawirada:alshabaab oo soo bandhigay hub iyo gadiid dagaal oo dowlada ay...
Xarakada Al-Shabaab ayaa faafisay qeybta labaad ee sawirrada dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee dhowaan ka dhacay saldhigga ciidanka dowladda ee deegaanka Ceelsaliini ee duleedka magaalada Marko ee gobolka Sh/hoose.
Qeybtan waxaa lagu soo bandhigay gaadiid dagaal iyo saanado milleteri oo xoogaga Al Shabaab ay kusoo furteen dagaalkii Ceel-saliini.
Laba gaari oo ah nooca dagaalka ee Cabdi bilaha loo yaqaano oo ay ku xiranyihiin qoryaha dhashiikaha iyo hub kala duwan oo isugu jiray qoryaha fudud, rasaas iyo qalab kale ayaa ka mid ahaa waxyaabaha la soo bandhigay.
Previous articleAhlusunna oo culays bdn uu soo wajahy kadib markii…….
Next articleXog : cabdi qaybdiid oo xilal culus dowlada uga soo dhameyay saraakiishii ciidan ka galmudug ee gaalkacyo